War saxaafadeed: Dawladda Puntland oo beenisay warbixin ay qortay Financial Times ee lacag madax-furasho ah oo lagu qabay madaarka Muqdisho. – Radio Daljir
Maajo 29, 2011 12:00 b 0
Garowe, May 29 – Dowladda Puntland ayaa maanta beenisay warbixin lagu daabacay jaraa?idka Financial Times maalintii 27 May 2011.
Warbixintaasi oo cinwaankeedu ahaa ?Britons held as ransom drop goes wrong? ayaa lagu sheegay ajnabi lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho iyagoo burcad-badeed u sida lacag madax-furasho ah, iyadoo la sheegay in lacagtaasi ay u socotay magaalada Galkacyo.
Dowladda ayaa aaminsan in warbixino khaldan ay bixiyaan dad qeyb ka ah siyaasadaha Somalia lana siiyo jaraa?idka caalamka.
Waxaa xusid mudan in tan iyo sanadkii 2009-ka ay hoos-u-dhac weyn ku timid dhaqdhaqaaqa burcad-badeedka Somaliyed ee xeebaha Puntland, iyadoo sabatuna tahay siyaasadda iyo waxqabadka Dowladda Puntland. Ilaa 305 burcad-badeed ayaa iminka ku xiran xabsiyadda Puntland.
Web: www.puntland-gov.net http://daljir.com/
Ururka suxufiyiinta Somaliyeed ee NUSUJ oo doortay hoggaan cusub.
Dadweynaha gobolka Cayn oo ku kala aragti duwan wada hadal nabadeed oo laga galo dagaalkii Kalshaale.